Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Guriga Baarlamaanka Britain oo lagu dhageystay Xuquuqul Insaanka Ogaden iyo Ethiopia.
Daawo: Guriga Baarlamaanka Britain oo lagu dhageystay Xuquuqul Insaanka Ogaden iyo Ethiopia.
Ururka iskuxidhka Dunida saddexaad iyo Baarlamaanka Britain ee lagu magacaabo “All Party Parliament Group on Third World Solidarity” waxay qabteen kulan dhageysiya oo looga hadlay Qadiyada Somalida Ogaden iyo Arrimaha Xuquuqul Insaanka Ethiopia. Dhageysigaas oo ka dhacay Guriga Baarlamaanka UK taariikhdu markay aheyd 18 March 2015.
Dhageysigan waxa furay MP David Anderson oo ah Gudoomiyaha Ururka Third World Solidarity islamar ahaantaasna ah Xubin kamida Baarlamaanka Wadanka UK. Xildhibaan David Anderson waxuu ka waramay u jeedada loo qabtay dhageysigan waxuna kusoo dhaweeyay Marti sharaftii kasoo qeyg gashay Dhageysigan oo kamid ahaayeen xubno badan oo kasoo jeeda Xisbiyada Kala gadisan ee Dowlada UK.
Xuquuqul Insaanka Ogaden
Dhageysigan ayaa lagu bilaabay Marwo Kowsar Cumsaan Badal oo u hadashay Qadiyada Ogaden iyada oo halkaasi kusoo bandhigtay warbixin ay kaga warameyso Xasuuqa iyo tacadiyada gumeysiga Ethiopia ka geystaan dhulka Ogaden.
Kowsar waxay sheegtay in Ciidamada gumeysiga Ethiopia xasuuqa ay ka wadaan dhulka Somalida Ogaden uu yahay mid lagu dabar goynayo dhamaanba bulshada somalida Ogaden. Kowsar oo cuskanaysa qodobo i tus oo itaabsiya; waxay soo qaadatay dhacdooyin aad u tiiraanyo iyo tiro badan oo ku dhisan xaqiiq iyo cadeymo kuwaas oo dhamaan muujinaya isir tirka bulshada soomaliyeed ee dhulka Ogaden.
Kowsar ayaa sidoo kale Dowlada wadanka UK ku eedeysay deeqaha ay siiso ciidamada Ethiopia gaar ahaan liyuu poliska, Deeqahaas oo wadanka UK ay horey u sheegteen inay joojiyeen una badaleen deeqo horumarineed. Kowsar ayaa arrintaas ku tilmaantay in dadkii xasuuqa geystay abaal marin lagu siinayo dilalkii ay geysteen.
Kowsar codsi aad u adag waxay u dirtay dowlada UK iyada oo sheegtay in wax dhaqaale ah aan lasiinin Talisak Ethiopia illaa ay oggolaato in dhulka Ogadeniya loo fasaxo Gudi Xaqiiqo Raadisa oo kasocda Qaramada Midowbay iyo in loo fasaxo warbaahinta caalamka inay kasoo waramaan Ogaden. Inta labadaas arrimood ay Taliska Woyanaha Ethiopia ka oggolanayaan lama siin kari gini dhaqaale ah taliska Ethiopia.
Dhageysigan aggaasimidiisa waxaa lahaa Clllr Mushtaaq Lasharie, Xoghayaha Third World Solidarity mudanahaas oo isagu saxiib la ah Jaaliyada iyo shacbiga kasoo jeeda dhulka Ogaden. Waxa uuna mudanaha oo kamida hoggaaminta shirkan bixiyay jawaabo Warbixintii Kowsar Cusmaan Badal. Waxa uuna sheegay in tacadiga Ogadeniya aan hada kadib dhagaha laga fareysan doonin islamarkaasna Third wolrld Solidarity ka shaqeyn doono sidii Dowlada Britain wax uga qaban laheyd xaquuqul insaanka. Mudanaha ayaa uga mahad celiyay Marwo Kowsar dadaalka ay ka muujisay iyo xogaha ay ku soo kordhisay dhageysigan.
Xuquuqul Insaanka Deegaanka Oromada
Shirkan waxaa kale oo lagu dhageystay Marxalada Xuquuqul Insaan ee deegaanka Oromada midaasoy soo diyaariyeen dhalinyaro aqoon yahana kuwaaso warbxino xasaasi ah oo qarsoona soo bandhigay.
Doorashada iyo Dhibaatada ka imanaysa.
Waxaa kale oo laga hadlay Arrimaha doorashooyinka Ethiopia ee la filayo inay dhacdo Bisha May iyo ifafaalo laga bixiyay sida doorashada taliska Woyanuhu ugu shuban doono iyo tacadiyada ay geysan doonaan bishaas May.
Dhageysigan oo si kadis ah uga soo qeyb gashay Haweenaydii Andhergachew Tsege ayaa ka warantay sidii seygeeda looga afuudabay dalka yemen looguna gacan galiyay gumeysiga Woyanaha.
Haweenayda Gudoomiyihii Ginbot 7 ayaa sheegtay inay aad uga xuntahay Xasuuqa ka socda dhulka Ogaden iyada oo tixraaceysa warbixintii Kowsar Cusman waxay sheegtay in dhibaatooyinkaas oo dhan ka jiraan Ogaden sidoo kale ay ka jiraan deegamo badan oo kamdia Ethiopia halkaasoo Taliska Woyanuhu ka taliyo. Waxayna ugu baaqday bulshadii kasoo qeyb gashay in lagarab istaago Qofkasta oo Woyanahu dhibaateeyo. Shirkan ayay ka codsatay in lagu taageero sidii Dowlada UK cadaadis loogu saari lahaa inay wax ka qabtaan qadiyada ninkeeda oo ah isagu nin heysta dhalashada Britishka.
Haayadihi Xuquuqu Insaanka ee ka hadlay
Shirkan waxaa kale oo ka hadlay Haayadaha Xuquuqul Insaanka Sida amnesty International iyo Haayada Reprive oo dhamaantoodba qarwaaqsaday tacadiyada ay geystaan Talsiak Ethiopia.
Martidii ka hadashay
Shirkan Waxaa kale oo ka hadlay Mudane Cabdiraxmaan Mahdi oo ugu baaqay shacabka Ogadeniya iyo Bulshada ku hoos dulman taliska Woyanaha Ethiopia inay iskaashadaan hal meelna uga soo wada jeestaan sidii heeryada Woyanaha la isaga qaadi lahaa. Mudane Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Ummada Ogadeniya muddo dheer heeryo gumeysi soo saarnayd talisyo kala gadisana ay soo dhibaateeyeen, waxaana jirta in wax badan kukala gadisanahay dadyowga Ethiopia balse waxaa jira inbadan oo kale oo aan ka mideysanahay. Maanta Qofkasta oo Ethiopia ku nool waa dulmane. xuquuqda aadamuhu waa mid aan dhamaanteen ka mideysanahay una baahan in Jaaliyadaha Ogadeniya, Oromada iyo shucuubta Ethiopia loobaahanyahay inay kawada shaqeeyaan. Mudanaha ayaa sidoo kale ka hadlay dowlada UK inay gabtay inay ilaaliso amaanka dadka heysta dhalashada Britishka. Isaga oo soo qaatay Andergachew. Waxa mudanuhu Ethiopia ku eedeeyay afduubka ay wadamada kale ka geystaan iyaga oo dowlado kale ku xad gudba.
Shirkan oo ay kasoo qeyb galeen Jaaliyada Somaldia Ogaden, Oromiya iyo Jaaliyadaha Ethiopia kasoo jeeda ayaa talooyin badan laga soo jeediyay waxaana kamid ahaa xubnihii halkaas ka hadlay
Marwo Qasiido oo u hadashay ururka Haweenka Somalida Ogaden, Qasiido ayaa ku dheeratay dhibaatooyinka haweenka somalida Ogaden loo geysto waxayna sii xoojisay warbixintii Kowsar Cusmaan kaga hadashay tacadiyada sida gaarka ah loola beegsado haweenka.
Saundra Satterlee oo kamida gudida third World Solidarity ayaa aad ugu dheeratay xuquuqda haweenka, marwadan oo shirkan qeyb kamida hoggaaminaysay ayaa dhiiri galisay haweenka Somalida Ogaden iyo guud ahaan haweenka ku dhibaateysan dalka Ethiopia.
Dr Trevor iyo Gabagabadii
Shirkan waxaa soo gaba gabeeyay Dr trevor oo ah saxiib khaasa oo u ololeeya Qadiyada Shacabka Oromada iyo Ogadeniya aadna ugu xeel dheer xuquuqul insaanka Ethiopia. Waxuuna gabagabadii shirka kusoo xidhay Codsigii Kowsar Cusman ee ahaa in Dalka Ethiopia aan lasiinin wax caawimaad ah illaa Taliska Ethiopia ka oggolaado in Gudi madax banaan oo Xaqiiq raadis ah loo diro Dalka Ethiopia.
Qodobada shirkan kasoo baxay ayaa waxaa markiiba la wareegay Xubno kamida baarlamaanka UK kuwaas oo kala doodi doona Dowladan Britain inta aan La gaadhin doorashada wadanka Britain.